-बर्खरै आयो ताजा खबर ! विमान दुर्घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका चालक जीवित - Online Tamang
-बर्खरै आयो ताजा खबर ! विमान दुर्घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका चालक जीवित
काठमाडौं : हिजो भएको विमान दुर्घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका विमानका चालक जीवित रहेका वंगलादेशी अधिकारीले बताएका छन् ।
विमानस्थलमा रहेको ट्राफिक कन्ट्रोल र पाइलटबीच प्रभावकारी रुपमा संवाद हुन नसक्दा दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । तर यूएस बंगलाले भने दुर्घटनामा पाइलट दोषी नभएको जनाएको छ ।
यूएस बंगलाका आसिफ इमरानका अनुसार पाइलट आबिद हसन जिउँदै छन् । इमरानले भने -‘उनी यसभन्दा अघि एयरफोर्समा थिए । त्यसभन्दा अघि उनी इन्स्ट्रक्टर थिए । हामीले अहिलेसम्म ट्राफिक कन्ट्रोल र पाइलटबीचको कुराकानी सुनेका छौं । हामीलाई लाग्दैन कि उनले केही गल्ती गरेका छन् । तपाईले पनि त्यो कुराकानी सुन्नुभयो भने त्यही भन्नुहुनेछ ।’
दुर्घटनापछि बंगलादेशको तीन सदस्यीय छानबिन टोली काठमाडौं आइपुगेको छ ।
PrevAn Exclusive Video- When Bangla Air was Burning(Video)
Next-मैले भन्दै न भनेको कुरालार्इ गलत प्रचार गरि मेरो चरित्र हत्या गर्न खोजियो : सुजाता पाण्डे